Quzhou Aoyin Metal Materials Co
Thumela ukupakishwa kunye nokuhanjiswa
Uzibandakanya kwi-Aluminium & Steel industry ukususela ngo-2007, i-Quzhou Aoyin Metal Materials., Co Ltd yi-aluminiyam edibeneyo kunye nentsimbi enemisebenzi emikhulu kwinkqubo yokuthumela ngaphandle.
Siyazingca ekudaleni ixabiso kubathengi ngaphezu kweminyaka eyi-10 . Sigxile kwiimarike ezahlukeneyo zaseMzantsi Melika, kuMbindi-mpuma, eAsia, eYurophu.
Sizibophelele ekuboneleleni ngexesha kunye neenkonzo ezikumgangatho ophezulu kunye neemveliso ezikumgangatho ophezulu kubathengi kwihlabathi liphela.
FUMANA IMVELISO ELUNGILEYO !
Sihambisa iimveliso ezivela eChina ukuya kwihlabathi liphela. Sixelele nje ukuba uphi.
Ipleyiti yealuminiyam yeAoyin 6mm iyathengiswa
I-6mm ipleyiti yealuminiyam ikwayenye yeemveliso ezis
5083 kusetyenziswa ipleyiti yealuminiyam eshushu yokuqengqeleka
I-5xxx ye-aluminiyam ipleyiti yeye-alloys ezisetyenziswa ngokuqhelekileyo. Eyona nto i-alloying element yi-magnesium kunye nomxholo we-magnesium phakathi kwe-3-5%. Inokubizwa ngokuba yi-aluminium-magn
yintoni inkqubo yepleyiti yokujonga ialuminiyam ekhazimlisiweyo
Mhlawumbi uqhelene nepleyiti yokujonga i-aluminium. Ikwaziwa njengepleyiti yomgangatho, ipleyiti yokunyathela okanye ipleyiti yokukhangela, ipleyiti ye-aluminiyam yedayimani ibonakalisa ipateni yeeday
3003 O Isangqa seAluminiyam ye-Cookware
I-3003 ye-aluminiyam isangqa kwi-cookware lukhetho olulungileyo lokwenza i-pan engagxiliyo ngenxa yokwakheka kwayo okulungileyo kunye nokuvutha kwayo.
NgathiIimvelisoIindabaKhuphelaUKhenketho lwasefektriQhagamshelana nathi
cofa ukuthetha nam